Isevisi Yokuthengisa Emva Kwesikhathi - I-HONG KONG SAUL Electronics LIMITED.
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Imali Sangezinsuku ezingama-30
Sifuna waneliseke ngokugcwele ngayo yonke into oyithenga ku-www.ebuyplc.com. Uma imikhiqizo yethu inezinkinga zekhwalithi futhi unganelisekile ngezimpahla ozithengile, ungayibuyisa leyo nto zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku loku-oda ukuze ubuyiselwe imali egcwele yentengo, ukhiphe ukuthunyelwa, ukuphatha noma ezinye izindleko ezihlobene.
Isiqinisekiso sethu semali sezinsuku ezingama-30 asisebenzi kuzo zonke izinto. Izinto ezisezitokwini kuphela ezizofanelekela ukuthola isiqinisekiso semali sezinsuku ezingama-30.
Umkhiqizo kufanele ubuyiselwe ekupakisheni kwawo kwasekuqaleni kwasefekthri usesimweni esihle, ungasetshenziswanga futhi ungavulwa, futhi unawo wonke amaphepha nezesekeli ukuqinisekisa isikweletu esigcwele.
Inqubomgomo Yokuthumela KaSaul Yokubuyisa ukuthi amakhasimende anesibopho sezindleko eziphumayo nezibuyayo zezimpahla nokuphatha imali lapho kubuyiselwa imikhiqizo kuSawule, kufaka phakathi nemikhiqizo ebuyiselwe ngaphansi kwe-30-Day Money Back Guarantee.
Sinesiqiniseko sokuthi uzokwaneliseka ngemikhiqizo esiyithengisayo njengoba iyi-100% yangempela futhi eyiqiniso. Siyaqiniseka ngoba izinga lethu lembuyiselo liphansi kakhulu.
Kodwa-ke, sinikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esihle kakhulu embonini sezinsuku ezingama-30 ezigcwele uma kungenzeka. Uma unganelisekile ngokuphelele, sicela uthumele i-imeyili ku-sales5@xrjdcs.com.